အေးမြတ်သူ က ” လကုန်ရက်လေး ဆို အိမ်ကခလေးလေးတွေ က အပြင်ထွက်ချင်ကြတယ်ရှင့်…..လိုတာလေးဝယ်ရင်း…. စကြ /နောက်ကျနဲ့ ဒီအဖေ…ဒီအမေ ကျန်းမာနေလို့ မမြတ်လေး ပျော်နေရတာပါ… မမြတ်လေး လန်းတယ်ဆိုတာ ဖေကြီး နဲ့ မေကြီး ကို မမှီ ပါဘူးရှင့်…. ချစ်တယ်နော် 😝😝😝” ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။
ငယ်ငယ်တည်းက မျက်နှာပြောင်တဲ့ သမီးလေး Emereece အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နိုင်းနိုင်း
တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ ဆောင်းရာသီကို အနွေးထည်အထပ်ထပ်၊ စောင်အထပ်ထပ်နဲ့ အံတုနေရတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့အဖြစ်